Kostà Rikà: Fifanolanana mikasika ny fahaleovantenan’ny oniversite UCR · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Mey 2018 8:08 GMT
Tamin'ny 12 Aprily 2010, fara fahakeliny polisy manamboninahitra 60 avy amin'ny Sampana mpanao Fanadihadiana ara-pitsarana Kosta Rikana (OIJ raha hafohezina amin'ny teny Espaniôla) sy mpikambana ao amin'ny polisy no tonga tao amin'ny Oniversiten'i Kosta Rika(UCR) mba hisambotra manamboninahitra misahana ny fifamoivoizana ao amin'ny campus (toby), izay voampanga ho nanao kolikoly. Na dia izany aza, nilaza ireo mpikambana ao amin'ny oniversite, anisan'izany ny mpianatra sy ny sampana fa manohitra ny sata fahaleovantenan'ny oniversite ity fikasana fisamborana ity. Araka ny Lalàmpanorenana Kosta Rikana, ny andininy faha-84:
Ny Oniversiten'i Costa Rica dia fikambanana fianarana ambony izay manana fahaleovantena amin'ny fanatanterahana ny asany ary manana ny fahefana ara-dalàna hahazo zo sy adidy ary koa hamaritra ny fifandaminany sy ny governemantany manokana. Ireo sampam-pampianarana ambony hafa ao amin'ny oniversite dia tokony hanana fahaleovantena arak'asa sy fahefana ara-dalàna mitovy tahaka ny Oniversiten'i Kosta Rika. Hanome ity fananam-pirenena ity ny Fanjakana ary hiara-hiasa amin'ny famatsiam-bola.
Mifototra amin'io fanadihadiana io, nanakana ny fidiran'ny polisy tao amin'ny tokotanim-pianarana ny mpianatra sy mpampianatra sasany, ka nitarika fifandonana. Vokatr'izany, mpianatra maromaro no naratra ary nentina tany amin'ny hopitaly ny sasany. Nisy mpampianatra sôsiôlôjia iray naratra mafy ary tapa-taolana. Taorian'ny fisamborana mpampianatra sy mpianatra sasany, napetraka ny komity iray mba hangataka ny famotsorana azy ireo, ary nikarakara diabe ny tompon'andraikitry ny UCR, izay nitarika ny famotsorana azy ireo.
Lahatsary avy amin'ny Habla Costa Rica:
Taorian'ny famotsorana azy ireo, dia mpianatra maro no nanohy ny hetsi-panoherana tamin'ny fanakanana ny lalana lehibe eo anoloan'ny Sekolin'ny Lalàna, mitaky ny fiarovana ny fahaleovantenan'ny oniversite. Niezaka nifampiraharaha tamin'ireo mpianatra ny polisy, saingy tsy nisy valiny mahafa-po. Noho ireo antony ireo, nanana hevitra samihafa ny bilaogera, tahaka an'i Simón Avilés ao amin'ny bilaogy Deme un Campo [es] (Omeo sehatra aho):
Mitady mpanao heloka bevava ny polisy ary nanao fahadisoana goavana amin'ny fidirana ao amin'ny anjerimanontolo miaraka amin'ny tafika mitam-piadiana. Raha miaro ny fahaleovantena izahay, dia manamafy ny hevitra ihany koa izany fa ao amin'ny UCR, “te-hiady fotsiny” izy ireo, ary avelao izy ireo tsy hanasokajy anay ho “adala mahery setra”. Manameloka ny karazana herisetra rehetra ataon'ny polisy sy ireo mpikambana ao amin'ny anjerimanontolo aho. Samy azo saziana ny fitondran-tenan'ny roa tonta, ary raha ny fijeriko, ny OIJ indrindra, no voalohany meloka amin'ny fifanoherana.
Ankoatra izany, tsy miombon-kevitra ny olona sasany mikasika ny fiarovan'ny fiarahamonin'ny oniversite ny fahaleovan-tenan'izy ireo, tahaka ilay mpanoratra ao amin'ny bilaogy He Dicho [es] (Nilaza aho) izay nanontany tena hoe nahoana ny mpianatra sy ny mpampianatra sasany no nanakana ny polisy tsy hisambotra manampahefana mpanao kolikoly, nanontany hoe “Iza no tohanan'ny manampahefan'ny oniversite? any amin'ny jiolahy?
Ao amin'ity firenena ity, manohitra ny herisetra, ny kolikoly ary manohana ny fampiroboroboana ny fanajana ny zon'ny olom-pirenena isika rehetra, saingy misy ireo olona izay amin'ny anaran'ny andrim-panjakana, izay misy ny maro an'isa tsy manohana azy ireo, mandika ny zon'ny hafa, ary mampiasa herisetra eny amin'ny toerana tokony handratoana fahaizana. Ao amin'ity bilaogy ity, maneho ny fanoherako lehibe an'ireo izay mampiasa herisetra ho fomba fanehoan-javatra aho, ary MAHARIKORIKO ahy raha lazaiko am-pahatsorana ireo olona mahatsapa fa mila zo emdrika kokoa ry zareo, raha mbola mampiasa ny “zony” na miady ho an'ny “idealy” “izay manitsakitsaka ny zo fototry ny tsirairay hafa izy ireo.
Sarin'ny fihetsiketsehana avy amin'i Adriana Vargas
Nanokatra adihevitra indray momba ny dikan'ny fahaleovantenan'ny onivesite ity fifandonana ity, ary nilaza ireo mpanadihady sasany momba ny lalàna fa misy ny fahasamihafana eo amin'ny fahaleovantena sy ny fiandrianana [es]. Na izany aza, maro no miombon-kevitra fa tsy mamaha velively ny fifandirana eo amin'ny olom-pirenena sy ny governemanta ny herisetra.